आफै नाङ्गिएको मान्छेलाई नियाल्दा – Basanta Maharjan
म अाठ नाै वर्षको उमेरमा थिएँ, बुबाले घर चलाउन पसल थाप्नु भयो । बडो मेहनत गरेर बुबाले पसललाई विस्तार गर्दै लानु भयो । पछि चल्तीको ठाउँमा अलि रामै्रसँग अर्को पनि पसल थाप्नु भयो । र, बाटोमा हिडिरहेको हाम्रो एक छिमेकी बुबालाई देखेर पसलमा पसेछन् र पसल अरुको होइन भनेर थाहा पाएपछि निस्केछन् । कति टाढासम्म पुगेर हो कुन्नी, फेरि सँगैको पसलमा पसेर सोधेछन्– “त्यो पसल उसै (मेरो बुबा) को हो ?”
‘साभार लेख लेखेर’ भन्नुको अर्को अर्थ चोरीको आरोप पो हो कि ? यो पक्का हो कि, धेरै लेख लेख्नेमा म पनि पर्दछु । लेख्नु मेरो ‘प्यासन’ पनि हो । आफूसँग भएकै विषयवस्तु, आफ्नै खोजअनुसन्धानलाई नै लेख्न नभ्याइरहेकोे अवस्थामा अर्काको कुरा किन चोरेर हिड्नु पर्यो ? यो यो विषयमा यसरी लेख्दा हुन्छ भनेर विषयवस्तुहरु अरुलाई दिँदै हिड्नेलाई चोरीका आरोप सुनेर रमाइलो पनि लाग्यो । पूर्व प्रकाशित लेखरचना तथा पुस्तकको ‘साइटेशन’लाई नै ‘साभार लेख लेखेर’ भनेको हो भने गम्भीर समस्या भएको छ, किनभने उनी प्राज्ञिक भनिएको एउटा नेवार संस्थाका ‘प्राज्ञ’ पनि हुन् । ‘आफूलाई बौद्ध विद्धान कहलाउन खोजेको धेरै भइसक्यो’ भन्नुको अर्थ बौद्ध विषयवस्तुमा लेख्दै गरेको जानकारी उनमा रहेछ । जुन क्षेत्रमा रुची भयो त्यही क्षेत्रमा लागेर केही योगदान गर्नुमा के आपत्ती ? मेरो क्षेत्र अध्ययन, अनुसन्धान र लेखन भएकाले गच्छेअनुसार यही माध्यम अपनाउनु स्वाभाविक हो । बौद्ध विषयवस्तुमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, लेखिन्छ र पढ्नेहरु आफैले मूल्याङ्कन गरेर जे भन्नु पर्ने हो भनिदिन्छन् । यो चाहेर र इष्र्या गरेर मात्रै प्राप्त हुने कुरा होइन । ‘… धेरै भइसक्यो’ भन्नुको अर्थ हो, यस क्षेत्रमा जे जति गरें, धेरै भइसक्यो । अनेकौं विषयमा लेख्ने क्रममा आजभोलि बौद्ध धर्म, दर्शन र इतिहासमा केन्द्रित छु । यही विषयमा गरेका कामहरु कति नै प्रकाशनमा आएका छन् र ? सबै काम प्रकाशनमा ल्याउने हो भने उनी अहिल्यै पनि यसलाई असामान्य ठान्दाहुन् । आआफ्नो योजना हुन्छ, बौद्ध विषयवस्तु बाहेक अरु त प्रकाशमा ल्याएकै छैन, तत्काल ल्याइँने योजना छैन पनि । फेरि अर्को रमाइलो शब्द हो ‘… अहिले त उहाँ नाङ्गिनु भयो ।’ यी लेखकले ‘धेरै’ लेखेको भनेपनि जहाँसम्म लाग्छ, तीमध्ये थोरै पनि पढेका छैनन् । पढेका हुँदो हो, उनको मनस्थिति यस्तो हुँदैनथ्यो ।